Chero chirongwa cheIOS nemvumo kune kamera yedu chinogona kutora mifananidzo nemavhidhiyo muchivande tisingazvizive | IPhone nhau
Chero chirongwa cheIOS nemvumo kune kamera yedu chinogona kutora mifananidzo nemavhidhiyo muchivande tisingazvizive
Apple mafomu agara achizivikanwa nekukumbira mvumo yekuwana echinyakare kunyorera kana zvinhu zveyedu iPhone, iPad kana iPod touch, izvo kusvika makore mashoma apfuura zvaive zvisingaite mune Android ecosystem. Pese patinoisa application inotibvumira kunyora mavhidhiyo kana kutora mifananidzo, iko kunyorera haizokumbira mvumo yekuwana kamera uye pamwe zvakare kunzvimbo yeku geotag mifananidzo nemavhidhiyo patiri kuishandisa.
Nyanzvi yeGoogle yakagadzira diki sisitimu inoratidza kuti mvumo dzatinopa kukamera yechigadzirwa chedu dzinotarisirwa neIOS dzinogona kushungurudzwa uye tora mifananidzo tisingazive kana kutanga kumhanyisa live vhidhiyo kune vechitatu mapato kubva kumberi kana kumashure kamera.
Dambudziko, anodaro Felix Krause, nderekuti mushandisi anokumbirwa kuti ape mvumo kune iyo kamera. Panogona kuve nechikonzero chiri pamutemo chekushandisa senge kutora pikicha kana kutora vhidhiyo, iko kunyorera kunogona zvakare kutora mafoto nemavhidhiyo chero nguva chero bedzi tiri kuzvishandisa isu tisingazvione.
Iko kunyorera kuyedza dambudziko iri isocial network application iyo inotikumbira mvumo yekuwana kamera uye kutora pikicha uye kuiburitsa Iko kunyorera kunobva kwatanga kutora mifananidzo iyo yakarembera pamadziro edu otomatiki kana kubvumirana kwedu.
Felix, inotsanangurawo mashandisiro anoita kumeso kumeso kukuziva iwe uye kunyangwe shandisa shandiso yekuratidzira kumeso kuyera maitiro edu ekushambadza izvo zvinoratidzwa pamadziro edu. Ichi chishandiso chinotiratidza mashandisiro anoita kamera, asi chishandiso chingade kutora mukana wedambudziko iri zviri pachena kuti chinoita zvizere muchivande uye pasina kusiya chero musara.
Kugadzirisa dambudziko iri Felix anosimbisa kuti pane nzira mbiri dzekuzviita: kupa mvumo yechinguvana kuchikumbiro kutora kutora pane imwe nguva kuiburitsa kana kuratidza chiratidzo mubharaki renzvimbo chinotiratidza kuti kamera iri kushanda panguva iyoyo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » Chero chirongwa cheIOS nemvumo kune kamera yedu chinogona kutora mifananidzo nemavhidhiyo muchivande tisingazvizive
LG inovhura fekitori nyowani yekupa makamera kuApple
Ndeapi Mesh network uye ari iwo akakosha riini?